Google wuxuu bilaabayaa Maareeyaha Google Tag Tag | Martech Zone
Google wuxuu bilaabayaa Maareeyaha Google Tag
Talaado, Oktoobar 2, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Haddii aad waligaa ka shaqeysay goobta macmiilka oo ay ahayd inaad kudarto lambarka beddelashada Adwords shaxanka laakiin kaliya markii tusmadaas lagu soo bandhigay shuruudo gaar ah, waad ogtahay madax-xanuunnada bogagga calaamadeynta!
Taagaggu waa xoogaa yar oo koodhka websaydhka ah oo kaa caawin kara bixinta fikrado waxtar leh, laakiin sidoo kale waxay sababi karaan caqabado. Tilmaamo badan ayaa ka dhigi kara boggaga gaabis iyo jahwareer; tags si khaldan loo adeegsaday ayaa qalloocin kara cabirkaaga; oo waxay noqon kartaa waqti-qaadasho waaxda IT-ga ama kooxda webmaster-ka inay ku darto astaamo cusub-taasoo u horseedi karta waqti lumis, xog lumis, iyo beddelaad lumis.
Maanta, Google ayaa ku dhawaaqday Maamulaha Google Tag. Kani waa aalad samaynaysa bogagga wax lagu qoro oo aad ugu fudud qof walba!
Tilmaamaha Maareeyaha Google Tag ayaa ku qoran sida ku qoran boggooda:
Suuq geynta - Waxaad ku bilaabi kartaa tags cusub dhowr guji oo keliya. Tan macnaheedu waa dib-u-eegis iyo barnaamijyo kale oo xog-wadeen ah ayaa ugu dambeyn gacantaada ku jira; lama sii sugi doono toddobaadyo (ama bilo) cusbooneysiinta koodhka websaydhka — iyo maqnaanshaha suuqgeynta qiimaha leh iyo fursadaha iibka ee hawsha.
Xog lagu kalsoonaan karo - Maamulaha Google Tag Manager qaladkiisa si sahlan loo adeegsado hubinta iyo xawaaraha dhejinta ee xayeysiinta ah micnaheedu waa inaad marwalba ogaato in sumad waliba shaqeyneyso. Awood u lahaanshaha inaad ka soo ururiso xog sugan shabakadaada oo dhan iyo dhamaan boggagaaga waxay ka dhigan tahay go'aamo aqoon dheeri ah iyo fulin olole wanaagsan.
Si dhakhso ah oo fudud - Maamulaha Google Tag Manager waa mid deg deg ah, dareen leh, oo loogu talagalay inuu u oggolaado suuqleydu inay wax ku daraan ama beddelaan astaamaha markasta oo ay rabaan, iyagoo sidoo kale siinaya IT-ga iyo asxaabtooda webmasterka kalsooni ah in degelku si habsami leh u socdo-isla markaana uu si dhakhso leh u rarayo - si aan isticmaaleyaashaadu weligood uga hadhin iyagoo sudhan .
Tags: maareeyaha tag googlegoogle +tagmaareeyaha tagtagistatags
Sida Loo Sameeyo Logo
Oktoobar 3, 2012 at 3:30 AM
Tan maan tijaabin, adigana waan kaa maqlay. Waad ku mahadsantahay tilmaamida tan, tagging waxay sahlaysaa bog kasta. Miyay bilaabayaan koronto-galinta sidoo kale WordPress-ka loogu talagalay calaamadeynta?
Oktoobar 3, 2012 at 5:03 PM
Weli ma arag mid, @disqus_FHwBYQKmUU: disqus laakiin waqti dheer kuma qaadan doono in la horumariyo midkood!